Mpanamboatra fanaka ivelany China Fivarotana mafana mpamatsy seza Rattan Wicker Aluminium fialam-boly efitrano fandraisam-bahiny Patio Garden Restaurant Dinning Set orinasa sy mpamatsy | Sun Master
Tady Patio SwingHot Fivarotana Swing Swing Rocking Chai ...
Fitaovana ambongadiny ambongadiny mora vidy any Wicke ...
Restaurant Leisure AluminiumBulk Modern Design Commer ...
Tady an-tokotany maoderina an-tokotany any an-tokotany tenona plastika PE Rat ...
4-Piece Steel Frame Powder Coating Aluminium Seza Ou ...
Fitaovana an-tokotany namboarina manokana 4 seza seza ...
Mpanamboatra fanaka ivelany dia mivarotra Rattan Wi ...
Orinasa ambongadiny endrika famolavolana varotra maro loko ...
Mpanamboatra fanaka ety ivelany Fivarotana mafana Rattan Wicker Seza mpamatsy Aluminium fialamboly efitrano fandraisam-bahiny seza Patio Garden Restaurant fisakafoanana fisakafoanana
Model No.: WA － 4267
Refy: W57 * D60 * H80cm
Marika: SUN MASTER
Loadability: 780pcs / 40'HQ
Loko: mitovy amin'ny katalaogin'ny fangatahan'ny mpividy
Model No. WA － 4267 lafiny W57 * D60 * H80cm
Marika MASTERAKA MASINA Loadability 780pcs / 40'HQ
Fitaovana lehibe Aluminium fantsom-dia28 * 1.5mmpowder coating, volotsangana toa vitaUV mahatohitra PE rattan; Aorian'izay ny seza sy ny seza dia voatenona miaraka amina W8Xt1.3mm PE wicker fisaka.paty tongotra plastika mainty
Fonosana 1.Sun Mast fonosana fanondranana mahazatra.
2. Araka ny fangatahan'ny mpividy manokana.
Kaontenera 1x20 ', azo ekena ny baiko mifangaro
misy santionany misy
Loko mitovy amin'ny katalaogy isaky ny fangatahan'ny mpividy
Fampiharana trano fisakafoanana, hotely, zaridaina, toeram-pisakafoanana, cafe, lavarangana, patio, dobo filomanosana
endri-javatra Sariaka ara-tontolo iainana, vokatra maitso, mahatohitra UV, tsy mahazaka loko, mandroaka rano, mora tehirizina sy hitaterana
Seza fisakafoana any ivelany, seza mafana famarotana Patio Resin Wicker seza Garden Rattan seza miaraka amin'ny vatan'ny volotsangana.
Seza ivelany any ivelany ho an'ny trano fisakafoanana fivarotana, kafe, bistro, trano fisotroana sns ...
Mifandraisa amin'ny seza zaridaina miaraka amina kalitao avo lenta, 100% namboarin'ireo mpanao asa tanana mahay.
Fomba mitovy amin'ny fomba ivelany ara-barotra any ivelany Textilene Mesh seza.
Resin Wicker Chair Garden Rattan Chairs miaraka amin'ny Frame-tian'i Bamboo dia iray amin'ireo seza fisakafoanana farany an'ny patio ivelany. Ny seza sy ny lamosina dia samy manenona PE rattan. Ny tady plastika sentetika dia mifanakaiky amin'ny rattan voajanahary, saingy azo ampiasaina mandritra ny fotoana lava kokoa eo ambanin'ny masoandro. Matetika, azo ampiasaina mihoatra ny 2000 ora izy io. Noho ny toetrany mahatohitra UV, ny seza wanazy tanety dia safidy mety indrindra satria seza bistro frantsay ho an'ny trano fisakafoanana, cyber cafe, hotely ary efitrano fisakafoana hafa.
Ny alim-pandrefesana aliminioma misy sary hosodoko vita amin'ny volotsangana, welding ary poloney tonga lafatra dia mahatonga azy ho tsara tarehy amin'ny tara-masoandro. Ny fefy vy dia mahatonga ny seza ho mavesatra lanja, stackable ary mora tehirizina. Ny famaranana ny vovoka dia manampy endrika ivelany tsy manam-paharoa amin'ny rafitra matanjaka. Ny ankamaroan'izy ireo dia manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny fanaovana fanaka ety ivelany. Ny asa-tanana sy asa tanana mahafinaritra dia mitazona ny fanaka tsy hilentika sy mihinjitra.
Seza fisakafoana Patio Furniture Wicker ivelan'ny trano fisakafoanana anatiny sy ivelany misy ratana miloko roa tonta vita amin'ny volavola vita amin'ny alimo. Amporisiho ny vahininao hipetraka sasatra ary hisotro zava-pisotro na fisakafoanana tsara miaraka amin'ity seza ara-nofo vita amin'ny ratana sy seza ivelany ity. Natao ho an'ny seza mampiadana ho an'ny fikarakarana sakafo.
Ny Sun Master dia tsy orinasa OEM & ODM fotsiny izay manana traikefa matihanina mihoatra ny 20 taona amin'ny fanaka ivelany, fa ny orinasa vaovao kosa dia mandroso modely vaovao isaky ny vanim-potoana. Nahazo ny BSCI sy ny ISO9001: 2015 izahay. Ny tsenan'ny fanondranana eto amintsika dia ny Etazonia sy ny firenena eropeana indrindra mandritra ny 20 taona.
Ireo fanaka ivelany rehetra azonay natao tamin'ny alàlan'ny fitsapana SGS. Manana ny fizotrany mifantina henjana amin'ny mpamatsy akora izahay, mba hiantohana ny kalitao sy ny tontolo iainana tsara indrindra amin'ny voalohany.
Raha tianao ny santionany maimaim-poana, manaova katalaogy amin'ny pricelist. Aza misalasala mifandray aminay amin'ny mailaka: terry@sunmaster.cn susan@sunmaster.cn faly kokoa izahay manome fanampiana amin'ny ho avy.
Teo aloha: Tady ivelan'ny trano maoderina manenona sofa napetraka 4-Piece Aluminium Cast Frame Patio Resadresaka seza miaraka amin'ny ondana ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny marobe.
Manaraka: Volavola maoderina vita amin'ny plastika vita amin'ny alim-baravarana vita amin'ny alim-baravarankely vita amin'ny alim-baravarana ivelan'ny trano Patio fisakafoanana seza 4-Piece Garden latabatra fanaka vita amin'ny varotra
Ambongadiny Modern Wicker Rattan Seza Resin PE W ...
Chaise Lounge ivelan'ny trano fanaka vy Patio Syn ...
Tady an-tokotany maoderina an-tokotany any an-tokotany tenona plastika P ...
Fitaovana fanaka ivelan'ny birao ivelan'ny trano ankehitriny
Modern endrika avo lenta aluminium plastika Woo ...
Rattan nentim-paharazana nentin-drazana Furniuture Rattan ...